HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Motu Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Avy any Alemaina i Heidi ary 73 taona izy izao. Lasa misionera tany Côte d’Ivoire izy nanomboka tamin’ny 1968. Hoy izy: “Ny tena mahafaly ahy dia hoe ‘mbola mandeha ao amin’ny fahamarinana’ ny zanako ara-panahy. Mpisava lalana sy anti-panahy izao ny olona sasany nampianariko Baiboly. Maro amin’izy ireny no miantso ahy hoe Mama na Bebe. Mandray an’ahy ho toy ny fianakaviany ny iray amin’ireo anti-panahy ireo sy ny vadiny ary ny zanany telo. Nomen’i Jehovah zanakalahy sy vinantovavy ary zafikely aho!”​—3 Jaona 4.
Miavaka tokoa ny fanompoana vitan’ireo anabavy mpitovo manitatra any an-tany hafa. Vao mainka mihabetsaka koa izy ireny. (Sal. 68:11) Tena mendrika ny hoderaina ireny anabavy ireny. (Mpits. 11:40) Sao dia misy azonao ovana àry amin’ny fiainanao, mba hahafahanao manao toa an’ireo anabavy be zotom-po nadinadinina tato? Raha manandrana manao an’izany ianao, dia hahita fa “tsara i Jehovah.”​—Sal. 34:8.
“Mandehana mitsidika tany mila mpitory bebe kokoa, amin’​izay mba mahita kely hoe hoatran’​ny ahoana ny fiainana any. Raha mbola tsy afaka manao an’​izany ianao, dia miaraha amin’​ny mpitory vahiny ao amin’​ny tany misy anao. Ianaro ny fiteniny sy ny kolontsainy. Tena ilaina koa ny miantehitra amin’​i Jehovah. Be dia be ny zavatra noeritreretiko hoe tsy ho vitako, nefa nanampy an’​ahy izy dia vitako ilay izy.”​—Karen
“Miresaha amin’​ny misionera sy mpisava lalana za-draharaha. Eritrereto daholo hoe inona no tafiditra amin’​ilay izy. Mivavaha mba hahazo ny tari-dalan’​i Jehovah. Tadidio koa fa mitovy matetika ny fomba fitorintsika eran-tany. Matokia fa tena hahafinaritra ny fiainanao raha manitatra any an-tany hafa ianao.”—Margaret